musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Sandals® Resorts Executive Sachigaro Inozivikanwa seGlobal Hospitality Mutungamiri
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Resorts • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Adam Stewart ajoina WTTC Executive Committee
Sachigaro weSandals Resorts ', Adam Stewart, akadaidzwa kuti ajoine Executive Committee yeWorld Travel & Tourism Council (WTTC). Iyo induction inomiririra shanduko inoitika uye inofambira mberi kunoitwa naStewart munguva yake yese muindastiri.
WTTC inomiririra yepasirese Travel & Tourism yakazvimiririra nhengo nenhengo dzinosanganisira mazana maviri maCEO, Chairs, uye maPurezidhendi.
Adhama anounza naye hupfumi hwechiitiko ave achishanda padhuze nababa vake vanononoka kuvaka izvo zvino, rimwe remhando dzinozivikanwa muindasitiri yedu.
Stewart akavimbisa kuenderera mberi nekusimudzira indasitiri inoenderera uye inobatanidza kupfuura zvazuro.
"Ndinokudzwa kujoina Executive Committee yesangano randakaremekedza zvikuru kubvira kutanga kwebasa rangu," anodaro Adam Stewart, Executive Sachigaro we Shangu Dzese-dzinosanganisira Resorts, "Chikwata chehutungamiriri ichi chakanangana neshungu dzekuyedza uye chikamu chekushanya, uye ini ndine shungu dzekupa. Tese pamwe chete, ticharamba tichisimudzira indasitiri inoenderera uye inobatanidza kupfuura zvazuro, tichiyeuchidza maindasitiri akavakidzana nehurumende dzekunze kuti kufamba chinhu chakakosha muhupenyu. "
IWorld Travel & Tourism Council inomiririra iyo yepasi rose Kufamba & Tourism yakazvimirira chikamu. Nhengo dzinosanganisira mazana maviri maCEO, maChair uye maPurezidhendi emakambani anotungamira epasirese ekuTenderera neKushanya kubva kunzvimbo dzese dzinofukidza maindasitiri ese. Kwemakore anopfuura makumi matatu, WTTC yakazvipira kusimudzira kuzivikanwa kwehurumende neruzhinji nezvekukosha kwehupfumi pamwe nevevanhu munharaunda yeTravel & Tourism chikamu.
Julia Simpson, Mutungamiri & CEO WTTC akati:
“Ndiri kufara kutambira Adam ku Executive Committee ye WTTC. Adhama anounza naye hupfumi hwechiitiko ave achishanda padhuze nababa vake vanononoka kuvaka izvo zvino, rimwe remhando dzinozivikanwa kwazvo muindasitiri yedu. Ini pachangu uye nemhuri yese yeWTTC tinotarisira kushanda naAdam munzvimbo yake nyowani. ”
Adam nababa vake "Butch" Stewart
Chiono chepakutanga chenhengo dzedare rekutanga chinoramba chakangofanana: hurumende dzinofanirwa kuona mafambiro nekushanya sechinhu chakakosha, bhizinesi rinofanira kuenzanisa hupfumi nevanhu, tsika nemagariro, pamwe nekutsvaga kwekukura kwenguva refu. Nhengo dzinosanganisira kuwanda kwemaindasitiri, kubva kunhandare dzendege kuenda kunevashanyi kuenda kumapoka ekugamuchira vaeni. Executive Council inoumbwa nemaChair, maPurezidhendi, uye maChief Executive.
Sangano rekuzvidira, hutungamiri hweWTTC hunogadza muenzaniso, vachipa yavo yakakosha nguva uye zviwanikwa kufambisa zviitiko zvepasirese mberi mune ino inogara ichichinja nyika. Vatungamiriri vemaindasitiri vakakokwa kujoina Executive Executive vanomira sevanokurudzira shanduko yakakosha nekuziva, vachikurudzira kufamba kwakachengeteka uye kunopfumisa kwemireniyoni iri kuuya.
Sandals® Resorts inopa vanhu vaviri vari murudo zvakanyanya kudanana, Luxury Inosanganisirwa® zororo ruzivo muCaribbean kuyana neayo 16 inoshamisa emahombekombe egungwa muJamaica, Antigua, Saint Lucia, Bahamas, Barbados, Grenada, uye Curacao kuvhura muna Kubvumbi 2022. Kupemberera 40 makore, iyo inotungamira ese-inosanganisirwa yekambani kambani inopa yakawanda yemhando inclusions kupfuura chero imwe pasi. Sandals Resorts yakasarudzika inosanganisira siginicha Rudo Nest Butler Suites® yeiyo yekupedzisira mune zvakavanzika uye sevhisi; vatengesi vakadzidziswa neGuild of Professional English Butlers; iyo Red Lane Spa®; 5-Star Global Gourmet ™ yekudyira, kuona yepamusoro-pasherufu doro, premium waini, uye gourmet hunyanzvi maresitorendi; Aqua Nzvimbo dzine hunyanzvi PADI® chitupa uye kudzidziswa; inokurumidza Wi-Fi kubva kumahombekombe kuenda kuimba yekurara uye Sandals Customizable Michato. Sandals Resorts inovimbisa vaenzi runyararo rwepfungwa kubva pakusvika kusvika pakuenda ne Sandals Platinum Maprotocol eUtsanana, matanho akasimudzirwa nekambani ehutano nekuchengeteka akagadzirirwa kupa vashanyi chivimbo chikuru pavanenge vachienda kuzororo muCaribbean pamwe neSandals Vacation Assurance nyowani, chirongwa chakazara chekudzivirira zororo chine indasitiri-yekutanga vimbiso yemahara kutsiva zororo kusanganisira nendege yevaenzi yakakanganiswa. ne COVID-19 inokanganisa kufamba kwekufamba. Sandals Resorts chikamu chemhuri dzinowanikwa neSandals Resorts International (SRI), yakavambwa nemuchakabvu Gordon "Butch" Stewart, iyo inosanganisira yemhuri-inotungamirwa Beaches Resorts. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo Sandals Resorts Luxury Inosanganisirwa® mutsauko, shanya sandals.com.